Ururka ONLF oo cambaareeyay rabshadihii ka dhacay Jigjiga, digniina udiray Raysal Wasaare Abiy. | puntlandi.com
Ururka ONLF oo cambaareeyay rabshadihii ka dhacay Jigjiga, digniina udiray Raysal Wasaare Abiy.
Ururka ONLF ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray saacado ka hor ku canbaareeyay DF ee Ethiopia inay xal millatari u isticmaasho xaaladaha ka jira deegaanka Soomaalida, waxay qasaaraihii ka dhashay shalay rabshadihii ka dhacay jigjiga u sababeeyeen in Ciidan millatari ah lagu soo fasaxay shacab iyo inuu maamul shaqo kala wareego.
ONLF ayaa war-saxaafadeedka ugu digay in reysul wasaare Aby Ahmed uu awood millatari u isticmaalo xaaladda deegaanka, waxayna ugu baaqeen in hanaan nabadeed loo maro fulinta isbadelka maamul ee deegaanka.
Sidoo kale ururkan ayaa walaac ka muujiyay dhibaatooyinka wali ka sii soconaya xuduudaha deegaanka ee xiga Oromia, waxayna ku adkeeyaan in arinkaas degdeg wax looga qabto.
Onlf ayaa aad ugu celcelisay in hanaan nabad gelyo loo abaaro arimaha soomalida, xitaa waxay ku sifeeyeen hanaankaas inuu noqonayo mid la xidhiidha wadahadaladooda ee lagu balansanyahay inay la yeeshaan Dowladda Ethiopia.